ဆယ်ကျော်သက်နှင့် တုပမှုဖိအား - Hello Sayarwon
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ သင့်ကလေးက သူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အပြုအမူနဲ့ အမူအကျင့်တွေကို တုပချင်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါ။ တုပမှုဖိအား သို့မဟုတ် တုပမှုလွှမ်းမိုးခြင်းက အမြဲတမ်း ဆိုးရွားတဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကိုပဲ ပေးတာမဟုတ်ပေမယ့်လည်း မိဘရော ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် သားသမီးတွေအတွက်ပါ စိတ်ပူစရာတွေ ပေးနေတုန်းပါ။ တကယ်လို့ မလိုအပ်တဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာမယ့်ဆို သူတို့ကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ သင်လုပ်ရနိုင်တဲ့ အရာအချို့ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
တုပမှု ဖိအားဆိုတာ ဘာလဲ။
တုပမှု ဖိအားဆိုတာ လူတစ်ယောက်က သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့အမြင်မှာ သူ့ကို တန်ဖိုးထား လက်ခံအောင် အဲ့သူငယ်ချင်းရဲ့ အပြုအမူတွေကို မသိလိုက်မသိဖာသာ တုပနေခြင်းကို ဆိုလိုတာပါ။ တချို့အခြေအနေတွေမှာ တုပမှုက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ပြုလုပ်တာပါ။ တုပမှုဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေအပေါ် အသင်းအဖွဲ့အတွင်း သူတို့ အပြုအမူနဲ့ ခံစားမှုတွေရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုက လွှမ်းမိုးထားပါလိမ့်မယ်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုက တစ်ချိန်တည်းမှာ ကောင်းကျိုးရော ဆိုးကျိုးပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ သင့်ကလေးက အတန်းဖော်ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ် သို့မဟုတ် ဖော်ရွေတဲ့ အမူအကျင့်တွေကို တုပဖို့ ကြည့်တတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကျောင်းတွင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ တိုးတက်လာနိုင်ပြီး ဒီကောင်းမွန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ခုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွင်း ကြုံရမယ့် အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်အောင် ကူညီပါပေးလိမ့်မယ်။
တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ မိဘတွေက ဒီတုပမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေအတွက် စိတ်ပူပန်နေတတ်ပါတယ်။ သင့်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေက သူတို့ကို ခွင့်မပြုတဲ့အရာတွေ စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးတာ သို့မဟုတ် ရိုင်းပြတဲ့အမူအရာတွေပြုလုပ်လာတာမျိုး စတဲ့ မကောင်းတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရလာနိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေထဲ ဝင်ဆန့်ဖို့ သင့်ကလေး ပြုလုပ်တတ်တဲ့ အမူအကျင့်တွေကတော့-
– ဆံပင်ပုံစံ၊ အဝတ်အစား သို့မဟုတ် အသုံးအဆောင်တွေကို အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ဆင်တူဝတ်ဆင်ခြင်း
– ပြောလေ့ပြောထမရှိတဲ့ စကားလုံးတွေရွေးပြီး ထူးထူးဆန်းဆန်း စကားတွေပြောခြင်း
– စည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖျက်လိုပြီး အန္တရာယ်များသော အပြုအမူတွေ ပြုလုပ်ခြင်း
– ဂီတနဲ့ ရုပ်ရှင်မှာ အကြိုက်ပြောင်းသွားခြင်း
– စာကြိုးစားမှု ပိုလာခြင်း သို့မဟုတ် စာလုပ်ချင်စိတ် မရှိခြင်း
– ဆေးလိပ်၊ အရက်နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်း
– ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့ လိင်မှုကိစ္စတွေ ပြုလုပ်ခြင်း
တုပမှု ဖိအားနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို ဘယ်လို ကူညီမလဲ
သင့်ကလေးနဲ့ မပြတ် ပြောဆိုဆက်ဆံမှု ရှိပါ။
ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ တုပမှု ဖိအားက ရရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့အမူအကျင့်အများစုက မိဘနဲ့ အဆက်အဆံမရှိလို့ ဖြစ်ကြတာပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်ရှုပ်နေပါစေ သင့်ကလေး ဘာလိုအပ်နေတယ်၊ ဘယ်သူတွေနဲ့ အပေါင်းအသင်း ဖြစ်နေဆိုတာတော့ သိပါစေ။ ဒါက သင်နဲ့ သင့်ကလေးကို ပိုမို ရင်းနှီးစေပြီး အဆင်မပြေတဲ့ အခြေအနေတွေကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အသိပေးမျှဝေဖို့ လွယ်ကူစေမှာပါ။
သင့်ကလေးအား သူ ဘယ်လိုငြင်းရမလဲ ဆိုတာ သင်ပေးပါ။
သင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးတွေကို သူတို့မလုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေကို ဘယ်လိုအချိန်မှာ ဘယ်လိုငြင်းရမလဲဆိုတာ သူတို့ဖာသာ နားလည်သဘောပေါက်အောင် ကူညီပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ သင့်ကလေးကို အရက်သောက်ခိုင်းတဲ့အခါ သူမကြိုက်ရင် “ မသောက်ပါရစေနဲ့၊ ကျွန်တော့အသည်းက မကောင်းတော့ သောက်ရင် နေမကောင်းဖြစ်နိုင်လို့ပါ “ လိုမျိုး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ငြင်းဆိုစေတာမျိုးပါ။
အဆင်မပြေတဲ့ အခြေအနေတွေက ရုန်းထွက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို အကြံဉာဏ်ပေးပါ။
တကယ်လို့ သင့်ကလေးက စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့ သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အနေအထားမှာ ပိတ်မိနေရင် သင့်ကို ချက်ချင်း ဖုန်းဆက်တာ သို့မဟုတ် စာပို့တာမျိုး လုပ်ဖို့ အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ လူမှုရေးအလုပ်တွေကို ရွေးချယ်ဖို့ သင့်ကလေးကို အားပေးကူညီပါ။
သင့်ကလေးက မိသားစုကိစ္စ၊ အားကစား၊ အတန်းအစည်းအဝေး သို့မဟုတ် ဝါသနာတူတွေ အဖွဲ့လိုက် အသိမျှဝေခြင်း၊ လိုမျိုး အပေါင်းအသင်းများများ ကိစ္စအဝဝရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအစုအဝေးက သူ့ရဲ့ဘဝကို ကောင်းမွန်တဲ့ အထောက်အပံ့ပေးမလဲဆိုတာကို လေ့လာ ရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုဗီဇနဲ့ အပေါင်းအသင်း ဝင်ဆံ့ဖို့ကို ချင့်ချိန်မယ့် နည်းလမ်းတွေ သိရှိဖို့က တော်တော် အရေးကြီးပါတယ်။ မိဘအနေနဲ့ သင့်ကလေးရဲ့ အမူအကျင့်တွေကို စောင့်ကြည့်သင့်ပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကြီးပြင်းမယ့်လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ဖို့ အားပေးကူညီရပါမယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ဆိုတာ မတည်ငြိမ်တဲ့ ခံစားမှုနဲ့ အမူအကျင့်တွေ ပြည့်နေတာမို့ ဖိအားတွေ မပေးဖို့ ဂရုပြုပါ။
Teens and Peer Pressure. http://www.webmd.com/parenting/teen-abuse-cough-medicine-9/peer-pressure. Accessed January 24, 2017.
Peer pressure. http://kidshealth.org/en/teens/peer-pressure.html#. Accessed January 24, 2017.
Peer Pressure: Its Influence on Teens and Decision Making. http://headsup.scholastic.com/students/peer-pressure-its-influence-on-teens-and-decision-making. Accessed January 24, 2017.